Consistency and Discipline – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on2July 2010 18 October 2010 Categories Parenting, Reproduction
5 thoughts on “Consistency and Discipline”
ဆရာ ရေ အခုလိုမျိုးထောက်ပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။
ကျမ မှာလည်း သားနှစ်ယောက်ရှိတာကြောင့် ဆင်ခြင်နိုင်အောင်
လမ်းပြပေးတဲ့အတွက် ထပ်မံ ကျေးဇူးတင် ကြောင်းပြောပါစေ။
3 July 2010 at 12:54 pm
ဆရာရေ ပြောရမှာတော့အားနာတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောပါရစေ။ ခုခေတ် ‘ကျောင်းဆရာ’ဆိုတာ ၀ါသနာလည်းပါ၊ စာလည်းတော်ပြီး professional အလုပ်တစ်ခုအဖြစ် ခံယူပြီး ၀င်လုပ်တဲ့ သူ ခပ်ရှားရှားကလား။
ဆရာအတတ်သင်ကျောင်းတွေတောင် ရှိသေးရဲ့လားမသိ။ ကျနော်တို့ခေတ်ကလို (ဆရာ့အမေလို) ဆရာမျိုးတွေ တော်တော်နည်းကုန်ပြီဆိုတာတော့ အသေအချာ ပြောနိုင်တယ်။ ကျနော်ဆရာနဲ့ လူချင်းမသိပေမယ့် သေချာပေါက်ပြောရဲတာ တစ်ခုရှိတယ်။ ဆရာ English တော်တာ ပင်ကိုယ်ပါရမီ အပြင် ဆရာ့အမေရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့်မဟုတ်လား။ ဆရာ့အမေတို့လို ကျောင်းဆရာမျိုး ကျနော်တို့ ခေတ်မှာ (ကံကောင်းထောက်မစွာ)မှီလိုက်ပေမယ့် အခုခေတ် ကလေးတွေအတွက် မျှော်လင့်ချက် သိပ်နည်းလွန်းတယ်။ ခေတ်၊စနစ်ေုကာင့် ကျနော်တို့ နိုင်ငံ မြောင်းထဲရောက်နေတာဆရာ။
တောရွာတွေမှာတော့ ဒါမျိုးတွေ ကြုံရတာ သိပ် မဆန်းတော့ သလိုပဲ။ စာကလည်း ဖတ်တိုင်း သိမ၊ သိတိုင်းလည်း ကျင့်မ ဆိုသလို ဆိုရမှာပေါ့။ စာဖတ်ရင်တော့ ကောင်းပါတယ်။ စာတွေထဲက ဗဟုသုတ တွေရတာတော့ အမှန်ပဲဗျ။ အလိမ္မာ စာမှာရှိ ဆိုတာကတော့ ဟုတ်ပါတယ်။
မူရင်း ဆောင်းပါး ဖော်ပြထားရာ Eleven Media ရဲ့ website (http://www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3628:2010-07-01-07-05-02&catid=78:2009-11-13-06-25-17&Itemid=135) က သည်ဆောင်းပါးအောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ မှတ်ချက်များကိုလည်း ကူးယူ ဖော်ပြပေးပါရစေ။ မျတ်ချက် အမှတ်စဉ် ၄ က ဆရာ Kthet ရဲ့ မှတ်ချက်ကတော့ အဲဒီ့မှာ ပါပြီးသား ၏သည်မလွဲဖြစ်နေတာမို့ ထပ်မံ မဖော်ပြတော့ပါဘူး။
#5 thanda 2010-07-04 15:38
In UK, they show series of ” Extreme parents guide”,”nanny 911″, “Super nanny”. I found they are helpful for daily life of families. Media is effective if we can use in good ways.
#3 moechanmyayoo 2010-07-02 14:13
ဆရာ့ဝေဖန်ထောက်ပြမှုကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီထက်ဆိုးတဲ့ သာဓကတွေလဲ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အများကြီးတွေ့ဖူးပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော ဆရာရယ်… အရင်း စစ်ကြည့်တော့ ကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်နည်းပါးမှု၊ ဗဟုသုတ အတွေးအမြင် နည်းပါးမှု၊ စာပေဖတ်ရှုမှု အားနည်းမှုတွေကြောင့်ပါပဲ။ ကျွန်တော့်တို့အသက် ၉၀ လောက် ဆိုရင်တော့…
#2 Mr.Liberal 2010-07-02 13:26
ကျွန်တော့်အမြင် ပြောရရင် မြန်မာပြည်ရဲ့ ဦးနှောက်ကောင်းတွေ ပြည်ပကို လွင့်စဉ်သွားရတာရယ်၊ ကျန်ရှိသေးတဲ့ လူကောင်းလူတော်တွေ ပါးစပ်ပိတ်၊ ချောင်ထိုးခံထား ရတာတွေကြောင့်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဆရာအတ္တကျော်နဲ့ ခေတ်ပြိုင်(သို့) အနည်းငယ် စောနိုင်တဲ့ မောင်သစ်ဆင်း၊ တင်မောင်သန်း အစရှိတဲ့ ဆရာတစ်ချို့ရဲ့ အဖြစ်တွေက ကျွန်တော် သိသလောက် အထင်ရှားဆုံး ဥပမာတွေပါ။
အရေးအသား ကောင်းကောင်း အချက်အလက် စုံစုံလင်လင်နဲ့ ရေးတတ်ကြသူ၊ ထောက်ပြ ဝေဖန်ပေးကြသူတွေ ဒီမှာ အတော်နည်းသွားပါပြီ။ ကျန်ရှိသူတွေရဲ့ လုပ်နိုင်အားတွေက ကန့်သတ်ခံရပြန်တော့…
အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်ဆိုတာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အမိ၊ အဖ၊ ဦးလေး၊ ဘဒွေးနဲ့ တူတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်တွေ မရှိ၊ ရှိတဲ့ လူက မပြောရဲကြတော့ ကျွန်တော်တို့ပြည်က လူတွေက “ရေနည်းငါး“လို ဖြစ်ချင်ရာ ဖြစ်ကျန်ခဲ့ရတော့တာပါပဲဗျာ။
ပြောချင်လျက်နဲ့ မျိုသိပ်ထားရတဲ့ စကားတွေ ဆရာ့ ရင်ထဲမှာ ရှိနေမယ်ဆိုတာ ကျိန်းသေပေါက် ပြောရဲတယ်။
#1 dennis 2010-07-02 11:51
ဆရာရဲ့ ကလေးသူငယ်များပြုစု ပျိုးထောင်ခြင်းအနုပညာဆိုတဲ့ စာအုပ်ဟာ ကျွန်တော်ရဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ဘ၀ကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိခဲ့ပါတယ်… အိမ်နဲ့ အဆင်မပြေတဲ့ အချိန်တွေမှာ ဆရာ့စာတွေကို ဖတ်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းခဲ့ရပါတယ်… ဆရာ့ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်… အခု ဆောင်းပါးလေးကို သဘောကျနှစ်သက်မိပါတယ်..
ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျော်။ အလိမ္မာစာမှာရှိဆိုတဲ့စကားကို မှန်ကန်ကြောင်း လက်တွေ့ကျကျ ထောက်ပြနိုင်သူကတော့ ဆရာမကြီးဒေါက်တာမတင်ဝင်းရဲ့ မိခင်ကြီးပဲဖြစ်မယ်ခင်ဗျ ။ ဆရာမကြီးတို့ခေတ်က ဒေါက်တာဘွဲ့ရဆိုတာ လက်ဆယ်ချောင်းပြည့်အောင်တောင်မနည်းတွက်ယူရမယ့် အချိန်မှာ ပညာမတတ်သော်လည်း စာအင်မတန်ဖတ်သော မိခင်ကြီးက သမီးဖြစ်သူဒေါက်တာမကြီး ကို ကောင်းစွာပြောဆိုဆုံးမတတ်ပုံကို ဆရာမကြီးရဲ့စာတွေထဲမှာဖတ်ရတာ အရသာလည်းရှိ၊ အတုယူစရာလည်းကောင်းလှပါတယ်။
Previous Previous post: Labouring under the misapprehension
Next Next post: Impacts of Corporal Punishment